Binomo တစ်ဦး legit ပွဲစားတစ်ခုသို့မဟုတ်သစ္စာပျက်လိမ်လည်မှု: 2020 ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်?
Binomo အွန်လိုင်းကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းနောက်ဆုံးသတင်းကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း 2020
Is Binomo လိမ်လည်မှုသို့မဟုတ်တရားဝင်အွန်လိုင်းရွေးချယ်စရာများကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်း?
ဘာဖြစ်တာလဲ Binomo ထင်ရှားသည်?
မ Binomo မဆိုအဓိကချို့ယွင်းချက်ရှိသည်?
သင်တစ်ဦးဖွင့်လှစ်သင့်ပါတယ် Binomo ကုန်သွယ်အကောင့်?
ဒါပေမယ့်တကယ့်အဘယ်အရာကိုမ Binomo ကုန်သွယ်အကောင့်ကမ်းလှမ်းမှုကို?
1. Binomo စံအကောင့်
2. Binomo ရွှေအကောင့်
3. Binomo VIP Account ကို
ဒါကြောင့်ကျွန်တော့်အမြင်သင်တစ်ဦးဖွင့်လှစ်သင့်ပါတယ်ရှိမရှိအဘယ်အရာနှင့် ပတ်သက်. ရဲ့ Binomo အကောင့်သို့မဟုတ်မဟုတ်လော
ငါကွဲပြားခြားနားဘယ်လိုဘယ်လောက်ရှိသလဲပါဘူး Binomo အင်္ဂါရပ်များ?
Binomo ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်စတင်လည်ပတ်ခဲ့သည့်အွန်လိုင်းရွေးချယ်စရာကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လင်းပိုင်ကော်ပိုရေးရှင်း၏လက်အောက်ခံဖြစ်ပြီးစိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရင်နဒင်းစ်တွင်မှတ်ပုံတင်နံပါတ် ၂၅၁၅၁ IBC 2014 တွင်ရုံးချုပ်ဖြစ်သည်။
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းစ် (First Vincent Bank, Ltd) အဆောက်အအုံ၏ပထမထပ်၊ ဂျိမ်းစ်လမ်း၊
သင်သည်ဖောက်သည်များ၏ပံ့ပိုးမှုကို chat မှတစ်ဆင့်အီးမေးလ်ပို့ခြင်းဖြင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည် ထောက်ခံမှု @binomo.com.
ဒီအရေးအသား၏အဖြစ် Binomo ၂၀၁၈ ခုနှစ်မေ လမှစ၍ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ္Commissionာရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ ၀ င်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာစင်မြင့်တစ်ခုတွင်တစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့လျှင်ဖောက်သည်များသည်တိုင်ကြားချက်အတွက်ယူရို ၂၀၀၀၀ အထိလျော်ကြေးပေးနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။
အကယ်၍ သင်ပလက်ဖောင်းကိုစမ်းချင်သေးလျှင်၊ သင်ကုန်သွယ်မှုစတင်ရန်သူတို့၏အနိမ့်ဆုံးဒေါ်လာ ၁၀ ဒေါ်လာအနည်းဆုံးအပ်ငွေ၏အားသာချက်ကိုယူနိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အားငွေအမြောက်အများမစွန့်စားဘဲပလက်ဖောင်းကိုစမ်းသပ်ရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။
ကုန်သည်သတိပေးချက် - သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားသောပလက်ဖောင်းဖြင့်သာကုန်သွယ်ခြင်းဖြင့်ကာကွယ်နိုင်သည်။ သင်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသည့်ပလက်ဖောင်း ၂ ခုကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိပါပြီ။ ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ပလက်ဖောင်းဖြင့်ယခုစတင်ပါ။
အဆိုပါ Binomo ပလက်ဖောင်းအတော်လေးထူးခြားသည်နှင့်အများအပြားကုန်သည်ဖော်ရွေ features တွေပေးထားပါတယ်။ သင်ပလက်ဖောင်းကိုသွားလာရန်အလွန်လွယ်ကူပြီးသင်လိုအပ်သမျှကိုသင့်အတွက်ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ပလက်ဖောင်းသည်ဇယားများနှင့်နည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိရိယာများစွာကိုပေးသည်။ ၎င်းသည်သင်၏ကုန်သွယ်မှု ဦး စားပေးများနှင့်ကိုက်ညီရန်သင်၏ကုန်သွယ်မှုမျက်နှာပြင်ကိုလွယ်ကူစွာပြုပြင်နိုင်သည်။
ကုန်သည်တိုင်းသည်သူတို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုထိန်းချုပ်လိုကြသည်။ Binomo ဒီထိန်းချုပ်မှုကိုကန့်သတ်ရန်ဟန်သောသူတို့၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများအတွက်အပိုဒ်ရှိပါတယ်။ အပိုဒ်ခွဲအရ၊ သင်၏ကုန်သွယ်မှုလည်ပတ်မှုသည်အပ်နှံငွေပမာဏအနည်းဆုံးနှစ်ဆမရောက်မီနှုတ်ထွက်ရန်ဆုံးဖြတ်ပါကသင်၏ရန်ပုံငွေမှ ၁၀% နှုတ်ယူလိမ့်မည်။
ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည် $ 100 ငွေသွင်းခြင်းနှင့် $ 200 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအရောင်းအထိုက်တန်အောင်ရှေ့တော်၌ထိုမြေတပြင်လုံးငွေပမာဏကိုထုတ်ယူဖို့ဆုံးဖြတ်ပြောကြပါတယ်။ Binomo သင့်ရဲ့ရန်ပုံငွေထဲကနေ 10% ($ 10) နုတ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီအွန်လိုင်းကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းဟာဒေါ်လာ ၁၀၀၀ နဲ့သရုပ်ပြထားတဲ့ Demo Trading အကောင့်ကိုပေးထားတယ်။ ပလက်ဖောင်းအတွက်ခံစားမှုရရန်ဤနေရာသည်စတင်ရန်ကောင်းသောနေရာဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် demo account သည်ကိရိယာများနှင့်ညွှန်းကိန်းများကိုအမှန်တကယ်အသုံးပြုခွင့်ပေးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ကုန်သွယ်မှုစွမ်းရည်ကိုလက်တွေ့အသုံးမပြုမီ၎င်းကိုသုံးနိုင်သည်။
သင်စိတ်ဝင်စားပါကသရုပ်ပြအကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရန်ခိုင်လုံသောအီးမေးလ်အကောင့်တစ်ခုသို့မဟုတ် Facebook သို့မဟုတ် Google အကောင့်တစ်ခုသာလိုအပ်သည်။ ထို့အပြင်သင်လိုအပ်ပါကသရုပ်ပြအကောင့်ရန်ပုံငွေများကိုအလွယ်တကူဖြည့်နိုင်သည်။
ပလက်ဖောင်းတွင်ကောင်းမွန်စွာဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသောကုန်သည်မျက်နှာပြင်နှင့်ပါရှိသည်။ ၎င်းသည်အထူးသဖြင့်အစပြုသူကုန်သည်များအတွက်အလွန်ကောင်းသောအရာဖြစ်သောအင်္ဂါရပ်များနှင့်မရှုပ်ထွေးစေပါ။ သင်၏ဘရောင်ဇာမှတိုက်ရိုက်ကုန်သွယ်နိုင်သည့်အပြင်၎င်းကိုလည်းသင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည် Binomo Android သို့မဟုတ် iOS အက်ပ်မှတဆင့်ပလက်ဖောင်း။
စံအကောင့်ဖွင့်လှစ်ရန်, သငျသညျ $ 10 တစ်သိုက်သာလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အမြတ်အစွန်းအရောင်းအ 85% တစ်ပြန်လာသည်။ ထုတ်ယူ3အလုပ်လုပ်ရက်အတွင်းလုပ်ငန်းများ၌နေကြသည်။
ရွှေအကောင့်ဖွင့်ရန်အနည်းဆုံးအပ်ငွေသည်ဒေါ်လာ ၅၀၀ ဖြစ်သည်။ ရွှေအကောင့်ပိုင်ရှင်များသည်အမြတ်အစွန်းကုန်သွယ်မှုများမှ ၈၆% အထိအမြတ်အစွန်းရရှိသည်။ ဤအကောင့်အမျိုးအစားသည်အပတ်စဉ်ငွေသား ၅% အထိရရှိနိုင်ပြီး ၂၄ နာရီအတွင်းငွေထုတ်ယူနိုင်သည်။ အခြားအကျိုးကျေးဇူးများတွင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမန်နေဂျာနှင့်အကြံပေးဝန်ဆောင်မှုများပါဝင်သည်။
အနည်းဆုံးလိုအပ်သည့်ပမာဏ ဖွင့်သည် Binomo VIP အကောင့် $ 1000 ဖြစ်ပါတယ်။ VIP အကောင့်ဖွင့်ပြီးလျှင် ၁၀၀% အပိုဆုကြေးရရှိနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ ခန့်မှန်းချက်မှန်ကန်ပါက၊ အောင်မြင်သောအရောင်းအ ၀ ယ်များ၏အမြတ်သည် ၉၂% အထိရောက်ရှိနိုင်ပြီး ၄ နာရီအတွင်းပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်သည်။ VIP အကောင့်ကိုင်ဆောင်သူများအနေဖြင့်အပတ်စဉ်ငွေပြန်အမ်းငွေ ၁၀% နှင့် Standard နှင့် Gold အကောင့်များမရရှိနိုင်သောအခြားအပိုဆောင်းလုပ်ဆောင်မှုများကိုရထိုက်သည်။ မှတ်သားသင့်သည်မှာဤ Live Account တစ်ခုချင်းစီသည် signup bonus ကိုနှစ်သက်သည်။ ရှိပြီးသားအကောင့်ပိုင်ရှင်များအားအခါအားလျော်စွာအပိုဆုကြေးများပေးသည်။
Binomo ကနေရွေးချယ်ဖို့ကုန်သွယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုအကွာအဝေးပေးထားပါတယ်။ ၎င်းတို့တွင်ငွေကြေးအတွဲများ၊ ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် cryptocurrencies တို့ပါဝင်သည်။ သင်ရရှိနိုင်သောပိုင်ဆိုင်မှုအရေအတွက်သည်အကြီးမားဆုံးသော VIP အကောင့်ကိုင်ဆောင်သူများနှင့်သင်စာရင်းသွင်းထားသောအကောင့်အမျိုးအစားပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ရွေးချယ်စရာနှစ်မျိုးရှိသည်။ Turbo ရွေးချယ်မှုသည်ကုန်သွယ်မှုကို ၆၀ စက္ကန့်အတွင်းအတွင်း ၀ င်ရန်နှင့်ထွက်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်ရှိသောဂန္ထဝင်မြင့် / အနိမ့်ရွေးချယ်မှုသည်သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန် ၁၅၊ ၃၀ နှင့်မိနစ် ၆၀ အသီးသီးရှိသည်။
ကုန်သွယ်မှုသက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်အထိသင့်ကိုမဆက်သွယ်ပါ။ ပလက်ဖောင်းကိုသင် sequential ရွေးချယ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ် 1 မိနစ်ကုန်ဆုံးကာလ အထိ6မိနစ်၏။
ဥပမာအားဖြင့်သင်ကုန်သွယ်မှုကိုညနေ ၄း၀၀ တွင်စတင်လျှင် 4:05, 4:06, 4:07, 4:08, 4:09 စသည့်သက်တမ်းကုန်ဆုံးနိုင်သည်။ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုသင် ၀ င်နိုင်သည့်ရာထူးအရေအတွက်ကိုကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပါ။ ၎င်းသည်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းအမြတ်အစွန်းတိုးမြှင့်ခြင်းကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ စနေ၊
စျေးနှုန်းခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုအလွယ်တကူလိုက်နာနိုင်ရန်အတွက်ပလက်ဖောင်းဇယားကို ၅ စက္ကန့်မှရက် ၃၀ အထိအချိန်အပိုင်းအခြားများစွာခွဲခြားနိုင်သည်။ သင်၏မောက်ဘီးကိုလှိမ့်ခြင်းအားဖြင့်ဇယားကွက်အတွင်းသို့ချဲ့။ လွယ်ကူစွာချဲ့နိုင်သည်။
ပလက်ဖောင်းသည်သင့်အားအချိန်နှင့်တပြေးညီဖြစ်ပျက်နေသောလမ်းကြောင်းများကိုခြေရာခံရန်သင့်တော်သောနည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိရိယာများကိုလည်းပေးသည်။ ၎င်းတွင်အခြားသူများအကြား Moving Average, RSI, MACD, CCI နှင့် Momentum ကဲ့သို့သောကိရိယာများပါဝင်သည်။ သင်အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်းအမှတ်အသားများပြုလုပ်ရန်ကူညီရန်သင်ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်မှန်ကန်စွာအသုံးပြုနိုင်သည့်ကိရိယာများကိုဆွဲရန်ပင်ခွင့်ပြုသည်။
သင်ရုံတစ်ကုန်သည်အဖြစ်စတင်လာပြီဆိုရင်တော့ Binomo သင့်အားလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်ရန်သင်ခန်းစာများစုဆောင်းထားပါသည်။ ၎င်းတို့တွင်ဗွီဒီယိုသင်ခန်းစာများ၊ အသေးစိတ်ဗဟုသုတအခြေခံနှင့်ဗျူဟာများအပိုင်းများပါဝင်သည်။ သူတို့၏မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများအပိုင်းသည်မည်သည့်အွန်လိုင်းရွေးချယ်မှုကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းနှင့်မဆိုမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းအသေးစိတ်မရှိပါ။
ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုတည်းတွင်သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သည့်အနည်းဆုံးပမာဏမှာ ၁ ဒေါ်လာဖြစ်သည်။ ၎င်း platform သည် credit / debit ကတ်များ၊ Neteller နှင့် Webmoney စသည့်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများကိုလက်ခံသည်။ ဤငွေပေးချေမှုစနစ်တစ်ခုခုကိုငွေထုတ်ယူသည်။ အနည်းဆုံးသင်၏နောက်ဆုံးအပ်ငွေနှစ်ကြိမ်ပမာဏမရောင်းမီသင်ငွေထုတ်ယူလိုပါကပလက်ဖောင်းသည်မည်သည့်ထုတ်ယူခကိုမဆိုကောက်ခံပါမည်။
ငါ platform ကတရားဝင်အွန်လိုင်းရွေးချယ်စရာကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းအဖြစ်ထင်ရှားဖို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုဖန်ဆင်းတော်မူပြီယုံကြည်ပါတယ်။ IFC ကထိန်းညှိထားတဲ့ပလက်ဖောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အနည်းငယ်ဂရုစိုက်ပါတယ်။ ၎င်းတို့သည်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းလည်ပတ်ငွေသည်သင်၏ငွေသွင်းငွေပမာဏထက်နှစ်ဆကျော်သောကုန်သွယ်မှုငွေလည်ပတ်မှုရှိရန်၎င်းတို့လိုအပ်ချက်သည်၎င်းတို့လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။
သို့သော်သင်သည်ဒေါ်လာ ၁၀ ဒေါ်လာနှင့်အနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၁ ဒေါ်လာဖြင့်ကုန်သွယ်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်စဉ်းစားသည် Binomo တန်ဖိုးရှိထွက်ကြိုးစားနေ။ ဒါပေမယ့်ငါ့အနောက်ဆုံးနိဂုံးချုပ်မချခင်, ငါတည်ဆဲကုန်သည်တိုင်ကြားချက်အဖြစ်ကောင်းစွာသကဲ့သို့ငါကွဲပြားခြားနားသောတန်ဖိုးသတ်မှတ်မှုကိုဘယ်လိုတစ်ပျက်ပြားထည့်သွင်းစဉ်းစားတာအကောင်းဆုံးင် Binomo အင်္ဂါရပ်များ။
ရှာဖွေနေစဉ် Binomo ကုန်သည်တွေတိုင်ကြားချက်တွေ၊ ငါ YouTube ဗီဒီယိုကိုတွေ့တယ်။ ၎င်းတွင်ကုန်သည်သည်အပိုဆုများနှင့်ဆက်စပ်သောအမြတ်အစွန်းများကိုမထုတ်ယူနိုင်ခြင်းအပေါ်တိုင်တန်းသည်။ ဤသည်မှာကုန်သည်အသစ်များအတွက်အပိုဆုကြေးပေးသောပလက်ဖောင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တွေ့ကြုံခဲ့ရသောပုံမှန်တိုင်ကြားချက်ဖြစ်သည်။ အပိုဆုကြေးများမှရရှိသောအမြတ်အစွန်းများနှင့်ဆက်နွှယ်နေသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရှင်းပြသည့်ကောင်းမွန်သောပုံနှိပ်စာကိုသင်ပထမ ဦး ဆုံးဖတ်ရန်အကြံပေးသည်။
ခါတိုင်းလိုအဖြစ်, အစဉ်မပြတ်ငါကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့ကြိုးစား ကွဲပြားခြားနားသောအွန်လိုင်းပလက်ဖောင်း သူတို့ပူဇော်ဖို့ရှိသည်မတူညီသော features တွေအပေါ်အခြေခံပါတယ်။ ဒီတော့ 20 တစ်ဦးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပေါ်အခြေခံပြီး, ဒီမှာငါ့ပြိုကွဲမယ့် Binomo'' s ကို features တွေ။
အဆိုပါ Binomo ပလက်ဖောင်းကောင်းစွာဒီဇိုင်းနှင့်သွားလာရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ ကုန်သွယ်ရေးမျက်နှာပြင်တွင်အသုံးဝင်မှုကိုဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေသည့်အင်္ဂါရပ်များစွာနှင့်ရှုပ်ထွေးခြင်းမရှိပါ။ ကုန်သွယ်မှုတွင်ကူညီရန်သင်သုံးရလွယ်ကူသည့်အညွှန်းကိန်းများနှင့်ကိရိယာများလည်းရှိသည်။
သင်၏အီးမေးလ်လိပ်စာကိုသာလိုအပ်သောကြောင့်သရုပ်ပြအကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ထားခြင်းသည်ပင်လေပြေတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏အီးမေးလ်လိပ်စာကိုအသုံးမပြုလိုပါကသင်၏ဂူဂဲလ်သို့မဟုတ်ဖေ့စ်ဘုတ်အကောင့်သို့ဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့်အကောင့်တစ်ခုအတွက်သင်သာစာရင်းသွင်းနိုင်သည်။ ပြောစရာမလိုပါ၊ platform ကို browser နှင့် mobile app များမှအလွယ်တကူရယူနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်အမှန်တကယ်ကုန်သွားနိုင်သည်။ ဘာသာစကား (၁၄) မျိုးဖြင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိကုန်သည်များသည်စင်မြင့်သို့ဝင်ရောက်ရန်လွယ်ကူစေသည်။
ရွေးချယ်နိုင်သောအကောင့်အမျိုးအစား (၃) မျိုးရှိပါသည်။ Standard အကောင့်သည် $3ထက် ပို၍ မထည့်ဘဲပလက်ဖောင်းကိုစမ်းသပ်ရန်လွယ်ကူစေသည်။ အကောင့်တစ်ခုစီတွင်ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်များပါရှိသည်။ သို့သော်၊ Gold နှင့် VIP အကောင့်များသည်ပိုမိုမြန်ဆန်သောငွေထုတ်ယူမှုများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများပိုမိုရရှိမှုနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအထောက်အပံ့များအပါအ ၀ င်ကောင်းမွန်မှုများကိုပေးသည်။
ရွေးချယ်ရန်ပိုင်ဆိုင်မှု ၄၂ ခုရှိသည်။ ၎င်းတို့တွင်ငွေကြေးအတွဲများ၊ ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ညွှန်းကိန်းများနှင့် cryptocurrencies တို့ပါဝင်သည်။
သို့သော်သင်ရောင်းဝယ်နိုင်သောကုန်ပစ္စည်းအရေအတွက်သည်သင်ပိုင်ဆိုင်သောအကောင့်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ အကန့်အသတ်ရှိသည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုပိုမိုရယူလိုလျှင်သင်သည်သင်၏ငွေပိုမိုထည့် ၀ င်ရန်လိုအပ်သော Gold သို့မဟုတ် VIP အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်။
သငျသညျတာဘို options များနှင့်ဂန္အမြင့်ဆုံး / အနိမ့် options များအကြားရွေးချယ်နိုင်သည်။ ယခင်သည် ၁ မိနစ်မှ ၅ မိနစ်အတွင်းသက်တမ်းကုန်ဆုံးသောကာလများရှိသည်။ အဆုံးတွင် ၁၅ နှင့် ၆၀ မိနစ်ကြားကာလဖြစ်သည်။ သင်တို့သည်လည်းတစ်ကြိမ်မှာမျိုးစုံအရောင်းအဝင်နိုင်ပါတယ်။
ပလက်ဖောင်းနှင့်စတင်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ သို့သော်၎င်းနောက်သင်ရရှိသောထောက်ခံမှုပမာဏသည်တိုးတက်မှုအချို့ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ သူတို့၏တယ်လီဖုန်းအထောက်အပံ့ကိုအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် 06:00 UTC မှ 15:00 UTC သာရနိုင်သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာဗီယက်နမ်အခြေစိုက် VIP ဖောက်သည်များအနေဖြင့်တစ်ပတ်လျှင် ၇ ရက်၊ တစ်ရက်လျှင် ၂၄ နာရီတစ်ရက်လျှင်ဖုန်းအထောက်အပံ့ကိုရရှိနိုင်သည်။
Binomo ကွပ်မျက်ခံရကုန်သွယ်အပေါ်အခကြေးငွေမသွင်းပါဘူး။ အနည်းဆုံးသင်၏နောက်ဆုံးအပ်နှံငွေပမာဏ၏နှစ်ကြိမ်ရောင်းဝယ်မှုမပြုလုပ်မီနှုတ်ထွက်ရန်ဆုံးဖြတ်လျှင်သင် ၁၀% နှုတ်ယူနိုင်သည်။ အမြတ်အစွန်းကုန်သွယ်မှုသည် ၉၂% ထိထိရောက်သောအမြတ်အစွန်းရရှိသည်။ ဒီပမာဏဟာ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိပြန်လာနိုင်တဲ့အခြားပလက်ဖောင်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိသိသာသာနိမ့်သည်။
ဒီပလက်ဖောင်းသည် debit / credit card၊ JCB, Neteller, Perfect Money, Webmoney, BTC / LTC, Advcash နှင့် Payeer တို့ကဲ့သို့ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများစွာကိုလက်ခံသည်။ ထုတ်ယူခြင်းသည်သင်၏အကောင့်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ (၄) နာရီမှ (၃) ရက်အတွင်း (၃) ရက်အတွင်းကြာလိမ့်မည်။ Binomo ထို့အပြင် VIP အကောင့်% 100 မှတက်ဖြစ်နိုင်သည့်သိုက်အပေါ်ဆုကြေးငွေပေးထားပါတယ်။ ဆုကြေးငွေပေါ်တွင်လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်ဦးထုပ် 30 နှင့် 40 ကြိမ်ဆုကြေးငွေပမာဏကိုအကြားနေကြပါတယ်။
ရုရှားမှာရောင်းဝယ်နေတာလား။ သင်တို့အတွက်အဆင့်မြင့်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းကိုငါတို့တွေ့ရှိခဲ့ပြီ။ စတင်ပါ ကုန်သွယ်ရေး Olymp Trade ယခု!
သင်၏သရုပ်ပြအကောင့်ကိုဖြည့်ရန်စွမ်းရည်သည်ကုန်သည်အသစ်များအတွက်ပလက်ဖောင်းကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုလေ့လာခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်အသုံးဝင်သောအရာဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်မှတ်သားထိုက်သောအပိုတစ်ခုမှာကုန်သည်များအားပေးသောပြိုင်ပွဲအမျိုးမျိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သာမန်ကုန်သွယ်မှုအပြင်ဘက်တွင်အပို ၀ င်ငွေရရှိရန်သင်ခွင့်ပြုသည်
Binomo လျောက်ပတ်သောအွန်လိုင်းကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာအနှံ့မှကုန်သည်များကိုဆွဲဆောင်ရန်ကြိုးပမ်းနေသည့် platform တစ်ခုမှသင်မျှော်လင့်ထားသည့်အင်္ဂါရပ်အားလုံးပါ ၀ င်သည်။ ပလက်ဖောင်းသည်ကောင်းစွာဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပြီးကုန်သည်များနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သောအင်္ဂါရပ်များစွာကိုပေးသည်။
သို့သော်သတိမထားမိနိုင်သောချို့ယွင်းချက်များစွာရှိသည်။ ပထမ ဦး ဆုံးစည်းမျဉ်းပြissueနာဖြစ်ပါတယ်။ လောလောဆယ် Binomo IFC ကသာထိန်းချုပ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အလွန်စိတ်ချစရာမဟုတ်ပါ။
သူတို့၏ဖုန်းအထောက်အပံ့သည်အပိုနာရီများနှင့်အင်ဒိုနီးရှားနှင့်ဗီယက်နမ်ပြင်ပရှိအခြားနိုင်ငံများအတွက်အထောက်အပံ့များပိုမိုပေးနိုင်သည်။ အချို့လည်ပတ်ငွေကြေးမ ၀ င်မှီထုတ်ယူခြင်းအတွက် ၁၀% အခကြေးငွေသည်ဤပလက်ဖောင်းနှင့်မရင်းနှီးမီထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်နောက်ထပ်အားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Tags: Binomo အွန်လိုင်း, Binomo အွန်လိုင်းကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်း, Binomo အွန်လိုင်းထရေးဒင်းလုပ်ငန်းစဉ်, binomo ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်အွန်လိုင်းကုန်သွယ်မှုသုံးသပ်ချက်, Binomo ဆန်းစစ်ခြင်း, Binomo စတော့အိတ်ထရေးဒင်းကုမ္ပဏီ, Binomo ကုန်သွယ်, Binomo ထရေးဒင်းပလက်ဖောင်း, Binomo ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း, ၏လုပ်ငန်းစဉ်သည် Binomo အင်ဒိုနီးရှားရှိထရေးဒင်း, သည်မဟာဗျူဟာ Binomo ထရေးဒင်း
Hugh - သြဂုတ်လ 22, 2018 @ 05: 18
ပှဲစား Binomo ကျေနပ်ပါတယ်။ ငါသူနဲ့သိပ်မကြာသေးခင်ကအတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ပေမယ့်ရလဒ်ကိုကျွန်တော်တကယ်ပျော်ခဲ့တယ်။ နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်ပြnoနာမရှိပါ။
Salwa Noor - ဇွန်လ 16, 2019 @ 11: 09
Binomo တစ်ကျေနပ်တှေ့ဆုံသူတို့နှင့်အတူများကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့သူတို့ကိုအားပေးရအာရှတိုက်မှာ၎င်း၏ဖောက်သည်များအတွက်တကမ္ဘာလုံးအလုပ်လုပ်ပေမယ့်အများအားဖြင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နားလည်မှုလမ်းညွှန်ချက်များမှာသူတို့ကိုကူညီနိုင်ရန်, Binomo
အင်ဒိုနီးရှားဗားရှင်းနဲ့ recen အတွက်၎င်း၏က်ဘ်ဆိုက်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်
Rendi Bagus - ဇူလိုင်လ 14, 2019 @ 03: 17
Sebenarnya waktu ane masih Baru, Gan, ikutan ပလက်ဖောင်း kaya ဂီနီအညွန်း, tadinya ane sempet ragu juga sih ။ Tapi ယား salahnya nyoba, lagi pula uang yang ane investasiin juga ga gede-gede အမတ် hihihi ။ Memang sih, pertamanya gak untung, Gan ။ Tapi ane gak pantang menyerah deh ။ Kalo kata pepatah, masih banyak Jalan menuju ရိုးမား။ Ane pelajari Strategy-Strategy, Gan ။ indikator-indikatornya pantengin Ane ။ Binomo juga memberikan သင်ခန်းစာသင်ခန်းစာသင်ခန်းစာ, untuk para pemula ။ ဒန် tahu, gak, Gan? ဤညွှန်ပြချက်အညွှန်းကိန်းသည် Wuih … ane untung habis, gan! Lumayan besar loh gan ။ Kerennya lagi, ပုံစံမျိုးစုံ Laptop ကို Sama အင်တာနက်
Sebenarnya waktu ane masih Baru, Gan, ikutan ပလက်ဖောင်း kaya ဂီနီအညွန်း, tadinya ane sempet ragu juga sih ။ Tapi ယား salahnya nyoba, lagi pula uang yang ane investasiin juga ga gede-gede အမတ် hihihi ။ Memang sih, pertamanya gak untung, Gan ။ Tapi ane gak pantan
cowlamelia3 atgmail - ဇူလိုင်လ 17, 2019 @ 08: 52
ငါဖွင့်လိုက်တိုင်းနေရာတိုင်းမှာ binaryoption (သို့) forex ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ အားလုံးသည်ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများစွာရှိသည်။ ငါ binaryoption နှင့်အတူရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ကြိုးစားသောအခါ plus option မှ၊ binomo IQoption အတွက်ကျွန်တော်အများကြီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်မှာကုန်သွယ်ရေးအတွက်တစ်ယောက်ယောက်ကကူညီနေတုန်းပဲ၊ ဒါပေမယ့်ငါအရှုံးပေါ်နေတယ်၊ ​​အခုသူတို့ကငါ့ကိုငွေပိုပေးချင်ကြတယ်။ ငါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အလားတူအခြေအနေများရှိခဲ့သူကိုလူတို့နှင့်အတူစကားပြောဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်၏အသုံးပြုသူအမည်ကိုဆက်သွယ်ပါ
ငါဖွင့်လိုက်တိုင်းနေရာတိုင်းမှာ binaryoption (သို့) forex ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ အားလုံးသည်ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများစွာရှိသည်။ ငါ binaryoption နှင့်အတူရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ကြိုးစားသောအခါ plus option မှ၊ binomo IQoption အတွက်ကျွန်တော်အများကြီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်။ ငါ့မှာကူညီပေးမယ့်သူတစ်ယောက်ရှိသေးတယ်
Rendy - သြဂုတ်လ 7, 2019 @ 21: 36
Sebelum ကုန်သွယ် di Binomo Saya memang sempat mencoba yang, dan Baru ကုန်သွယ် di အိပျ Binomo setelah tahu kalau Binomo ပလက်ဖောင်း dan pelayanannya sudah update ကို။ UI ကို-nya sangat gampang dipahami dan tutorialnya juga sudah banyak sekarang ။ Kalau Saya biasanya nyari di Yutub Aja ။ Semakin kesini Binomo menurut Saya semakin Mantul, asalkan စကားပြေ lancar terus, terus ini Saya pasti pakai ပလက်ဖောင်းရုပ်သိမ်းပေးရန်။ Mantap Gan!
Sebelum ကုန်သွယ် di Binomo Saya memang sempat mencoba yang, dan Baru ကုန်သွယ် di အိပျ Binomo setelah tahu kalau Binomo ပလက်ဖောင်း dan pelayanannya sudah update ကို။ UI ကို-nya sangat gampang dipahami dan tutorialnya juga sudah banyak sekarang ။ Kalau Saya biasany
Ferdi - သြဂုတ်လ 8, 2019 @ 07: 54
ada yang နိုင် bantu gimana caranya ဆုတ်ခွာ? Saya Sudah ရက်သတ္တပတ် ၂ ပတ်အကြာတွင်။ parah nih binomo.
Andrey - သြဂုတ်လ 18, 2019 @ 06: 04
Berdasarkan pengalaman Saya, Binomo ကုန်ပစ္စည်းများရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသောကုန်ပစ္စည်းများသည်။ Dengan မှ $ 10 မနိမ့်ဆုံးသိုက်နှင့် $ 1 ကုန်သွယ်, အမြတ်အစွန်းနှင့်အမြတ်အစွန်း။ penarikanana pun tak ကို bermasalah ။ Salut Buat BInomo
Berdasarkan pengalaman Saya, Binomo merupakan Salah satu tempat terbaik bagi ကုန်သည် untuk melakukan ကုန်သွယ် pemula ။ Dengan hanya $ 10 untuk နိမ့်ဆုံးသိုက် dan $ 1 untuk ကုန်သွယ်, အမြတ် yang lumayan besar ditawarkan ။ Penarikan Dana Pun tak pernah berma
ဆီလ်ဗီယိုကဲသာဘုရင် - သြဂုတ်လ 19, 2019 @ 19: 24
eu fiz အွမ် investimento က de ခွန်အား pequeno အီး estou gostando site ကို apesar က de eu SER ပြုပါအွမ်ကုန်သည် iniciante Nao achei muito dificil စရဖ ainda tenho mui တစ် aprender ။
Wijayanto - သြဂုတ်လ 22, 2019 @ 05: 34
Kalau akun binomo အချက်ပေးအချက်အလက်များ kok gan narik dananya ။ စဉ်းစားတွေးခေါ်ပါ။ မိနစ်ပိုင်း။
ကားလို့စ် - သြဂုတ်လ 22, 2019 @ 14: 05
Leticia ဂျေ - သြဂုတ်လ 22, 2019 @ 14: 08
Ótimoconteúdo! Binomo realmente é bem diferenciada
Carla - သြဂုတ်လ 28, 2019 @ 23: 26
Adoro ဏ Binomo, Facility က de operar အီး com muito conteúdo pra ajudar os iniciantes, usei, aprovei အီး semper indico ။
Kharis - သြဂုတ်လ 29, 2019 @ 13: 28
Lancar အချက်အလက်များ, ကုန်သွယ်ရေး…အရောင်းအဝယ်အတွက် crypto yang paling ajib ။ အကောင့်အကောင့် demo, pelajari yang crypto aja ။ legit tuh ။ သင်ခန်းစာယူရန်ကြိုးစားခြင်းသည်သင့်လျော်သည်။ ဟဲဟဲ .. btw binomo လက်ဆောင်ပေးမယ်။ biar tambah semangat!
Lancar အချက်အလက်များ, ကုန်သွယ်ရေး…အရောင်းအဝယ်အတွက် crypto yang paling ajib ။ အကောင့်အကောင့် demo, pelajari yang crypto aja ။ legit tuh ။ သင်ခန်းစာယူရန်ကြိုးစားခြင်းသည်သင့်လျော်သည်။ ဟဲဟဲ .. btw binomo လက်ဆောင်ပေးမယ်
ဖာနန်ဒိုသြဂတ်စ - စက်တင်ဘာလ 4, 2019 @ 23: 16
Excelente plataforma, uso pra investir em လဲလှယ်က de moedas ။ အို suporte Ao usuárioé muito bom အီး passa muita confiançaမှ semper recomendando ။
Ferdy - စက်တင်ဘာလ 7, 2019 @ 09: 34
Sepengalaman Saya, Binomo adalah tempat ကုန်သွယ် yang bagus ။ Selama kurang lebih2Bulan bergabung, tak pernah ADA masalah mulai Dari သိုက်, ကုန်သွယ်ရေး, sampai ရုပ်သိမ်းပေးရန်။ semuanya lancar Jaya
Ferdy - စက်တင်ဘာလ 7, 2019 @ 09: 35
Leticia ဂျေ - စက်တင်ဘာလ 17, 2019 @ 13: 42
Acho Uma ótima plataforma တည်ရှိနေ pontos Que podem melhorar မရှိ geral éတန်ချိန်ဘိုအာ Mas
Hery Sugiharto - စက်တင်ဘာလ 28, 2019 @ 08: 53
Benny R. - စက်တင်ဘာလ 29, 2019 @ 06: 42
Masih aman ။ masih terus berusaha di turnamen supaya nmr2lah အနည်းငယ်မျှသာ။
ယောဂ - အောက်တိုဘာလ 19, 2019 @ 02: 59
Menurut saya, Binomo သင်တစ် ဦး တည်းတည်နေရာကိုနေရာချခြင်း SSejauh မှသတင်းအချက်အလက်တောင်းခံရန်လိုအပ်သည်။ WD သည်ဤနည်းအားဖြင့် 1 hari ။ မင်္ဂလာပါ
ariadi - အောက်တိုဘာလ 19, 2019 @ 20: 00
wd အိန်ဂျယ် temen asu
Luisa - နိုဝင်ဘာလ 14, 2019 @ 17: 34
Faran - နိုဝင်ဘာလ 18, 2019 @ 08: 09
Binomo စာနယ်ဇင်းဆရာတ ဦး တည်းကကူညီပေးပါ။ ယခုသင်ခန်းစာယူရန်လိုအပ်သည်။ Selain itu, bonusnya juga အမှန် menggiurkan
Faju - နိုဝင်ဘာလ 19, 2019 @ 06: 17
မှတ်ပုံတင်ထားသော puas dengan ဖြစ်သည် BInomo။ XNUMX mengecewakan
ဖာတာအဖွဲ့ - ဒီဇင်ဘာလ 17, 2019 @ 14: 38
Binomo မှတ်မိနေသေးသည်။ အရောင်းအ ၀ ယ်စကားများ၊
5 ×လေး =
သုံးသပ်ချက်များ:	0 အသုံးပြုသူပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
Created:	မေလ 28, 2020
အဆိုပါအဘို့အ sign-တက် Binomo ညာကဒီမှာမြှင့်တင်ရေးကို Right Now!